Tsika yeChina | Kufamba Nhau
Mariela Carril | 07/09/2021 17:00 | China, tsika nemagariro
China inyika inoshamisa ine mireniyamu, yakapfuma uye yakasiyanasiyana tsika. Zvakafanana nepasi rakaparadzaniswa, nemitauro yaro, mitambo yayo, zodiac yayo, idiosyncrasy yayo ... dai zvaive nyore kutaura chiChinese, ndinofunga paizove nebudiriro muvadzidzi vemutauro iwoyo. Asi mutauro weChinese wakaomarara ...
Ngatiregei kuzvidemba, nhasi tinofanirwa kutaura pamusoro pezvakanaka chinese tsika.
2 Chinese tsika: zvitendero
3 Tsika dzeChinese: chikafu
4 Chinese tsika: zodiac
5 Chinese tsika: mitambo
China ndiyo nyika ine vanhu vakawanda pasi rose, ine vagari vanopfuura mabhiriyoni 1400 uye zvinotora mavhiki mazhinji kupedzisa kuverenga kwenyika imwe neimwe nguva. Pamusoro pezvo, kwenguva yakati zvino uye tichifambidzana nepfungwa ye "maitiro maviri, nyika imwe" (capitalism uye socialism), yave simba rekutanga rezvehupfumi hwenyika.
China ine matunhu makumi maviri neshanu, matunhu mashanu akazvimiririra, managuru mana ari pasi penzvimbo uye nzvimbo mbiri dzehutongi idzo dziri Macao neHong Kong. Inotiwo Taiwan, seimwe dunhu, asi chitsuwa ichi chakaramba chiri nyika yakazvimiririra kubva kuChinese Revolution.
Iyo nyika hombe iyo ine miganhu nenyika gumi nemana y nzvimbo dzayo dzakasiyana. Kune magwenga, makomo, mipata, makoronga, nyika dzemupata, nenjodzi dzinodzikira. Tsika yaro ndeyemireniyeri kubvira hunyanzvi hweChina hwazvarwa mazana emakore apfuura.
Yakanga iri panguva ingangoita yeiri mireniyoni kuvapo monarchical nyika, asi muna 1911 hondo yekutanga yevagari vemo yakaitika iyo yakakunda imba yekupedzisira. Mupfungwa iyi, ini ndinokurudzira zvikuru kuona Emperor yekupedzisira, firimu rakanakisa naBernardo Bertolucci.
Mushure mekupera kweChipiri Hondo uye kubviswa kweJapan kunharaunda yeChinese makomonisiti akakunda muhondo yevagari vemo uye vakaiswa kuhurumende. Ipapo ndipo pakakundwa maChinese kuenda kuTaiwan ndokutanga nyika yakazvimiririra, inogara ichitaurwa kubva kumahombekombe. Gare gare kwaizouya makore ekuchinja, dzidzo yesocialist, mapurazi akabatana, nzara uye pakupedzisira, imwe nzira yakasiya nyika muzana ramakumi maviri nemana.
Chinese tsika: zvitendero
Ndicho nyika dzakawanda dzechitendero kwavanogara Buddhism, Taoism, Islam, Katurike nemaPurotesitendi. Sezvo bumbiro razvino rinoremekedza rusununguko rwekunamata uye chinhu chakakosha kwazvo chevanhu.
Izvi zvitendero zvine huvepo mumaguta mazhinji muChina, zvinoenderana nedzinza rinogara imomo. Izvo zvakakodzera kujekesa izvo kune dzinza rinopfuura makumi mashanu muChina, kunyange hazvo vazhinji vari vaHan, asi ichokwadi kuti tsika dzechiChinese zvakajairwa ChiTao nechiConfucius, sezvo ihwohwu uzivi hunozadza upenyu hwezuva nezuva.
Vazhinji maChinese vanoita imwe tsika yeimwe chitendero, kungave nekuda kwekutenda kwakanaka kana ngano. Minyengetero kumadzitateguru, vatungamiriri, kukosha kwepanyika kana kutenda muruponeso kwakagara kuripo. Zvakatoipisisa, nhasi hazvisi zvekuti chimwe chezvitendero izvi ndicho chikuru uye chakamanikidzwa. Ivo vese, hongu, vakura kwazvo uye vakapfuma uye matavi akadonha kubva kwavari kwese kwese.
El buddhism inotangira muIndia anenge makore 2 XNUMX apfuura. VaHan Chinese vazhinji vechiBuddha, sezvakaita avo vanogara muTibet. Munyika mune nzvimbo zhinji dzechitendero dzechiBhudha senge iyo Wild Goose Pagoda kana iyo Jade Buddha Tembere.
Kune rumwe rutivi, ChiTao chinowanikwa munyika uye zvakare makore angangoita chiuru nemazana manomwe. Iyo yakavambwa naLao Tzu uye yakavakirwa panzira yeTao uye "hupfumi hutatu", kuzvininipisa, tsitsi uye kusagadzikana. Ine kuvapo kwakasimba muHong Kong neMacao. Kana zviri zveTaoist saiti, iri paGomo reShai mudunhu reShandong kana Tembere yaMwari weGuta, muShanghai.
Kune zvakare nzvimbo ye iyo Islam muChina, yakabva kunyika dzechiArabhu makore angangoita chiuru nemazana matatu apfuura uye nhasi ine vatendi vanosvika mamirioni gumi nemana vari muKazak, Tatar, Tajik, Hui kana Uyghur, semuenzaniso. Nekudaro, kune iyo Great Mosque yeXi'an kana iyo Idgar Mosque, muKashgar.
Pakupedzisira, ChiKristu uye mamwe marudzi echiKristu akauya kuChina kubva kuvashambadzi nevatengesi, asi yakave nani uye yakasimbiswa mushure meOpium Wars muna 1840. Nhasi yave pedyo nemamirioni matatu kana mana emamiriyoni evaChinese nemaPurotesitendi mashanu emamiriyoni.
Tsika dzeChinese: chikafu
Zvide. Chii chandingataura? Ndinonamata chikafu cheChinese, Iyo yakakura zvakasiyana mumidziyo uye nzira dzekubika uye hazvigoneke kufinhwa nekunakirwa kwainako. Izvo iwe zvaunoda kuti uzive nezve Chinese chikafu chikafu ndechekuti Iyo yakakamurwa mumatunhu nenzira dzakasiyana dzekugadzirira.
Saka, isu tine chikafu cheNorth China, West, Central China, East neSouth. Imwe neimwe ine zvinwiwa zvayo, zvayakagadzirwa uye nzira yayo yekubika. MaChinese anofarira kudya uye anowanzo tevera akaratidzirwa tag. Iko kunogara muenzi wega kwakakosha, sezvo kuva muyenzi wekuremekedzwa hakuna kufanana nekuva mumwe wacho. Uye kusvikira iye akakosha munhu anonzwa kuti hapana anoita. Iwe zvakare unofanirwa kugadzira yekutanga tositi.
Panguva yekudya kwemasikati unofanirwa kurega vakuru vachizviita pakutanga, iwe unofanirwa kutora mbiya sezvinoita vamwe, pane kurongeka mune zvigunwe zvako, zviri nyore kutora chikafu kubva pamahwendefa ari padyo newe kuitira kuti usadaro kutambanudza patafura uye kunetsekana, usazadza muromo wako, taura nemuromo wako uzere, usanamatira zvimiti muzvikafu asi vatsigire yakatwasuka, zvinhu zvakadaro.
Ndima yakaparadzana inokodzera they china. Iyo tsika yese. Tea inogadzirwa pano uye inodyiwa zuva rese, mazuva ese. Kana iwe uchifunga kuti kune nhema chete, tsvuku uye girini tii ... iwe watadza kwazvo! Tora mukana werwendo rwako kuti udzidze zvese nezve tii. Mhando yetii inotongwa nekunhuwirira, ruvara, uye kuravira, asi mhando yeti uye kunyangwe mukombe zvakakosha. Zvakatipoteredza zvakakoshawo, ndosaka kutarisirwa kuchitorwa pamwe nemuchadenga, hunyanzvi, kunyangwe paine mimhanzi kana kwete, nzvimbo ...
Kune mamwe maratidziro akagadzirirwa kudzidza nezveChinese tii nhoroondo uye uzivi.
Chinese tsika: zodiac
Chinese zodiac i12-gore kutenderera uye gore rega rega rinomiririrwa nemhuka iyo ine humwe hunhu: gonzo, mombe, ingwe, tsuro, dhiragoni, nyoka, bhiza, mbudzi, tsoko, jongwe, imbwa nenguruve.
Este 2021 ndiro gore remombe, chiratidzo chechinyakare chesimba mutsika dzeChinese. Zvinowanzofungidzirwa kuti gore remombe rinozove gore rinobhadhara uye nekuunza rombo rakanaka. Pane here chero zviratidzo zvinoonekwa senge rombo rakaipa? Hongu zvinoita sekudaro hazvina kunaka kuzvarwa gore rembudzi, kuti iwe uchave muteveri uye kwete mutungamiri ...
Pane kupesana, kana iwe wakazvarwa mugore redhiragi zvinoshamisa. Chaizvoizvo, avo vakazvarwa mugore reshato, nyoka, nguruve, gonzo, kana ingwe ndivo vane rombo rakanaka.
Chinese tsika: mitambo
Netsika yakapfuma kudaro, chokwadi ndechekuti mhemberero uye zviitiko zvetsika zvakawanda munyika. Gore rese kutenderera, uye ruzhinji rwakarongeka zvinoenderana nekarenda yemwedzi weChina. Mhemberero dzakakurumbira ndeye Mid-Autumn Mutambo, Chinese Nyowani Nyowani, Harbin Ice Mutambo, Shoton Mutambo muTibet, uye Dragon Boat Mutambo.
Mushure meizvozvo, ichokwadi kuti kune mabiko anoshamisa muBeijing, Shanghai, Hong Kong, Guilin, Yunnan, Tibet, Guangzhou, Guizhou ... Naizvozvo, kana iwe uchifarira kuve chapupu kana kutora chikamu mune chero chazvo, unofanirwa tarisa kuti chii chichaitika kana iwe uchienda.
Kana zvakadaro kupinza mitambo Izvo zvinoitikawo kuChina, Kisimusi pazuva reValentine, Zuva rekutenda kana Halloween, kungodaidza inozivikanwa. Neraki kune mahofisi ezvekushanya anoronga mafambiro achinyatso fungisisa zviitiko nemhemberero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » tsika nemagariro » Tsika yechina
Chairo chikafu cheAguascalientes
Maitiro ekuenda kuNorth Korea